Shikhar Samachar | घरसँगै भत्कियो परिवार : हात समातेका छोरा सहित चार जनाको गयो ज्यान घरसँगै भत्कियो परिवार : हात समातेका छोरा सहित चार जनाको गयो ज्यान
घरसँगै भत्कियो परिवार : हात समातेका छोरा सहित चार जनाको गयो ज्यान
डोटी- घर ! एक दरिलो आड ! आत्मरक्षा र परिवार सुरक्षाको अत्यन्त विश्वासिलो धरोहर ! सर्वोत्तम सुरक्षा अनुभूत गराउने एक अद्भूत छहारी !
पुर्खाको पसिनाले सिञ्चित आफ्नो घरसंग यस्तै सुरक्षा अनुभूति थियो आदर्श गाउँपालिका–१ खलगडाका ३१ वर्षीय लोगे लुहारको पनि । ‘केई थिएन् । बलियै लाग्थ्यो । खै के भो के भो ?,’ उनी दुखद् अनुभूति साँट्छन्, ‘जुन घरको छहारीमा सुरक्षा महशुस हुन्थ्यो । त्यै घरले बज्रपात पा¥यो !’
उनले भनेजस्तै त्यै विश्वासिलो घर उनको परिवारको सबैभन्दा ठुलो असुरक्षा बन्यो । श्रीमती, एक छोरा र दुई छोरीको मृत्युको कारक बन्यो । सोमबार राती त्यै घर भत्कदा उनकी २६ वर्षिया श्रीमती विष्ना लुहार, १० वर्षीय छोरा पारस, छोरीहरु पाँच वर्षीया सिरु र नौ महिनाकी कटीको मृत्यु भयो । स्वयम् लुहारका साथै ५२ वर्षिया आमा पाना, दुईवर्षिया छोरी अशु, छोरीज्वाई भेट्न आएकी ६० वर्षिया सासु झाँकरी विक र १२ वर्षीय भद्यासाला ईन्द्र बिक घाईते भए । उनीहरुको दिपायलस्थित शैलेश्वरी अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । अवस्था सामान्य छ ।
सोमबार राती दुईबजे लोगे पिसाब गर्न बाहिर निस्किएका थिए । त्यसपछि भित्र पस्ने क्रममा घरबाट धुँलैधुँलो निस्कन थाल्यो । कतैबाट घर भत्कन लाग्यो भन्ने आवाज आयो । ‘सायद पल्लो घरको आमाको आवाज हुनुपर्छ,’ लोगे भन्छन् ।
घरभित्र उनका श्रीमान–श्रीमती, चारजना छोराछोरी, आमा र सोमबारै भेट्न आएका सासु र भद्यासालागरी नौजना थिए । सबैलाई व्यूँझाएर ढोकाबाहिरमात्र के पु¥याएका थिए, घर आँगनतिरै गल्र्याम्म ढल्यो ! उफ्रेर बारीमा पुग्नेजती बचे, बाँकी चारजनालाई घरको ढुङ्गा र काठले किच्यो । जगदेखी नै भत्किएको घरसंगै सम्पत्ती नष्ट भए । एकहल गोरु, गाई र दुई बाख्रा पनि मरे ।
घर कमजोर कहिल्यैँ लागेन्
भत्किएको घर लोगेका बाजे लछीले पहिलो तला हालेका हुन् । कहिले हाले ? उनी भन्न सक्दैनन् । तर ४०÷४५ वर्षअघि उनका बुवा गोरेले दुई तला थपेको उनकी आमाले सुनाएको बताउछन् । ‘बालखकै टुहुरो हुँ । पाँचवर्षकै हुँदा बुवा स्वर्गबास भएका रे !,’ लोगे भन्छन्,‘त्यसपछि त्यै घर सहारा हो । अर्को बनाउने हैसियत छैन् ।’
त्यसमा पनि घर बलियो नै लागेकाले अर्को बनाउने सोच कहिल्यै नआएको उनी बताउछन् । ‘घर बलियो नै लाग्थ्यो । आफ्नो जीवन यसैमा काटौँला सोच्थे । तर लेखी अर्कै रहेछ,’ उनी थप्छन् । उनका अनुसार घर चुहिदैनथ्यो । तीन महिनाअघि जेठमा भारतको चेन्नईबाट फर्किएर आउदा चुहिने एकठाउँ टालेपछि थप चुहिदैनथ्यो ।
घर भत्कियो ! श्रीमती र चारजना छोराछारीको मृत्यू भयो । परिवारमा बाँकी आफु, आमा र एक दुईवर्षकी छोरी मात्र बाँकी रहीन् । लोगे आफु घाईते छन् । घाईते अवस्थामै उनले मंगलबार मसानघाट पुगेर मृतक चारैजनालाई दागबत्ती दिए ।
भारतमा चौकीदारी गरेर परिवार पाल्ने उनीसंग न उपचार खर्च छ, न किरिया खर्च ! ‘चेन्नईबाट रित्तो हात फर्किएको हुँ । यहाँ यो बज्रपात प¥यो,’ भावविह्वल हुँदै उनले भने,‘अब के गर्ने ? कसरी गर्ने ? केही सोच्न सकिरहेको छैन् ।’
पिडितलाई कांग्रेसको राहत
नेपाली कांग्रेस डोटीले पिडित परिवारलाई २० हजार दिने घोषणा गरेको छ । कांग्रेस डोटीले घटनापछि मंगलबार बिहान शोक वक्तव्य जारी गर्दै आकस्मिक राहत कोषबाट उपचार खर्चबाफत १० हजार र किरियाखर्चबाफत १० हजार गरी २०हजार रकम उपलब्ध गराउने कांग्रेस डोटीले घोषणा गरेको हो ।
डोटीमा घर भत्किँदा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु : पाँच घाइते